मेगा बैंकले दिने भयोे, २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैक > मेगा बैंकले दिने भयोे, २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
मेगा बैंकले दिने भयोे, २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
काठमाडौं । मेगा बैंकले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने भएको छ । यसका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सातौं वर्षमा प्रवेस गरेको अवसरमा चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर दिने घोषणा गरेको हो ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलि शाहले राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए । योसँगै लगानीकर्ताहरुको लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, बैंकलाई देशकै अग्रणी बैंकका रुपमा उभ्याउन मर्जर र एक्वायरलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । मर्जर बाहेक हकप्रद सेयर जारी गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने योजना रहेको बैंकका अध्यक्ष भोजराज शाहले बताए ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा चुक्ता पूँजी पुर्याउन मर्जर वा एक्वायरमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशितः २०७३ साउन ८
२०७३ साउन ८ गते १०:०० मा प्रकाशित
भक्तपुर दुवाकोटमा ६ सय रोपनी जग्गामा सर्ने भो वीर अस्पताल !
बाटोबाटै काम गर्दै इन्जिनियर !
नझुक्किनु होला अब पाँच सयको नयाँ नोटमा एउटैमात्र पाटे बाघ हुनेछ
२०० प्रतिशत हकप्रद बाँडेको हाम्रो विकास बैंकको सेयर मूल्य यसरी भयो समायोजन
डिप्रोक्स लघुवित्तले १०० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने
आज सुनको भाउमा भारी गिरावट